नेपाल बंगलादेशसँग ८३ रनले पराजित » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नेपाल बंगलादेशसँग ८३ रनले पराजित
मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १२:४४ मा प्रकाशित !
१५ चैत​, काठमाडौं। बगंलादेशमा जारी एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको दोस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली बगंलादेशको यु–२३ टोलीसँग पराजित भएको छ । शेखकमल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग ८३ रनले पराजित भएको हो ।
टेष्ट मान्यताप्राप्त बंगलादेशले दिएको २५८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४२ ओभर ३ बलमा अलआउट हुँदै १७४ रनमा समेटियो । घरेलु टोली बगंलादेशसँग पराजित भएसँगै नेपालको दोस्रो चरण पुग्ने सम्भावना सकिएको छ । अब नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा बिहीबार हङकङसँग खेल्नेछ ।
इमर्जिङ कपको दोस्रो चरणमा पुग्न नेपाललाई बगंलादेशसँगको खेल जित्नैपर्ने दबाब थियो । तर, लगातार दुई खेल गुमाएसँगै नेपालको सम्भावना सकिएको हो । नेपाल सोमबार भएको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पनि ६ विकेटले पराजित भएको थियो । समूह चरणको खेलपछि समूहको दुई शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछन ।
बंगलादेशले दिएको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको नेपाली ब्याट्सम्यान सुरुवातबाटै धर्मराएको थियो । नेपालले सुरुवाती तीन ब्याट्सम्यानलाई सस्तैमा गुमाएको थियो । ओपनर तथा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र अर्का ओपनर सुनिल धमलामात्र एक एक रनमा आउट भएका थिए । यस्तै, अर्का युवा ब्याट्सम्यान आसिफ शेख पनि १२ रनमा आउट हुँदा नेपालले मात्र १६ रन जोडेको थियो ।
तर, नेपालको पारी दुई युवा ब्याट्सम्यानहरु दिलिप नाथ र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सम्हालेका थिए । चौथो विकेटका नाथ र ऐरीले ९८ रनको साझेदारी गरे । दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ५६ रनको अर्धसतकीय पारी खेले भने दिलिप नाथ ४१ रनमा आउट भए । त्यस्तै, नेपालका लागि विनोद भण्डारीले ३३ रन जोडे । बंगलादेशका लागि रहातुल फेर्डोउसले ४ तथा महोमद सैफूदिनले २ विकेट लिए ।
दोस्रो पटक हुन लागेको इमर्जिङ कपमा टेष्ट र एसोसियट गरी आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ । यसपटक टेष्ट राष्ट्रबाट भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको यु २३ टोलीले सहभागिता जनाउनेछन । त्यस्तै, एसोसियटमा नेपालसहित, अफगानिस्तान, हकङङ र युएईका राष्ट्रिय टोलीको सहभागिता रहनेछ । यसअघि सन २०१३ मा इमर्जिङ कप सिंगापुरमा भएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: २६ सिट भन्दा बढी क्षमताका गाडी सञ्चालनमा रोक
NEXT POST Next post: भोलि प्रधानमन्त्री ल्हासाबाट स्वदेश फर्कंदै
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १२:४४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १२:४४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १२:४४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १२:४४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र १५, २०७३ १२:४४